Ndingawana sei HGH muThailand?
- Izvo zvino zviri nyore kwazvo, unogona kuisa urongwa wako pawebsite yedu inonyatsotsanangura kero yekutakura, zita rako uye nzira yekubhadhara, tichakushevedza kana E-mail panguva yekuendesa yakajeka
Unochengetedza sei HGH?
- Tichengetedza mishonga iri friji pa 2-8 digiri yekushisa. Iyo ndiyo yakanakisisa yekuchengetedza mamiriro ekukura kwehomoni.
- Tinobvuma kubhadhara mari muBangkok kana Pattaya. Kubhadharwa kwekuwedzera hormone mune mamwe maguta eThailand tinogamuchira mubhadharo yebhangi yeThai
Chii risanyatsobuda yenyu?
- Tinotengesa mhando chaiyo yeHGH brands seGenotropin, Ansomone neJintropin iyo yakagadzirwa nemaitiro uye yakasimbiswa neGGP.
Zvese ndezverma grade HGH michina, iyo inoshandiswa kurapa GH yakashaya vana, kupisa uye zvimwe zvirwere.
Ndingave sei nechokwadi chokuti iyi haisi HGH yakaipa?
- Chikonzero nei tisingatengesi kukura kwehomoni yevamwe vakugadziri ndiyo ngozi yakawanda yekusawirirana. Sedu redu harisi gore rokutanga rinogamuchira chete mahomoni ekukura emhando dzemhando dzakakurumbira seBelgian Genotropin , ChiChinese Ansomone uye Jintropin. Mamwe mabhii ekukura kwehomoni 70% fake.
Ndingakwanisa here kununura kuwedzera hormone courier kuenda kuhotera, imba yangu kana condo?
- Hongu zvirokwazvo, kutumira tsamba kunosunungura asi kunowanikwa muBangkok nePattaya chete. Kune mamwe maguta muThailand, kutengeswa kunoitwa Air cargo mune chimwe chigadzirwa chemishonga chakasununguka zvakare.
Iwe unobatanidzwa sei uye kuchengeta oda yako?
- Neimwe nzira yekuendesa, tinoisa kukura kwehomoni mune imwe chigadzirwa chechiremba chinonyanya kukosha.
Iwe une dare rezvemishonga yekukura hormone kana kliniki muBangladesh kana Thailand?
- Tiri mishonga yepaIndaneti, ine mukurumbira wakanaka uye pamusoro pemakore 5 ekutengeserana kweIndaneti muThailand
Ungatengesa sei pamitengo yakadaro?
- Tinowana HGH zvakananga kubva kufekitari. Inotibvumira kuchengetedza mutengo wakaderera. Uyewo, HGH ndiko kushandiswa kwedu - ndiyo chete mhando yemishonga yatinotengesa - saka tinogona kukupa mutengo wakanakisisa pane zvitoro zve steroid, zvinotengesa HGH sekuwedzera.
Izvi hazvikoshi kune HGH chaiyo yeBelgian chigadzirwa chePfizer,
uye iwe unowana kutumira mahwindo mubhokisi rinotonhorera, doro uye nheyo yakazara yeingano
Hongu zvirokwazvo, patinenge taita urongwa, tora chinyorwa-tinosunungura uye tinoratidza kuti tingashandisa sei
Iwe unogona kununura Genotropin kuhotera yangu muBangkok uye kukuratidza kuti ungashandisa sei peni?
Hungu, chokwadi tinogona kuita kuendesa kuBickK airport